जोशीपुर गाउँपालिकामा कैलाली जिल्ला भरीकै पालिका मध्ये जोशीपुर गाउँपालिका संस्कृति पुस्तान्तरण शिक्षा कार्यक्रम जस्तो एक ऐतिहासीक र महत्वपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्न सफल भएको प्रधानाध्यापक ओली बताउनु भएको छ ।संस्कृति पुस्तान्त्रण उदघाटन कायक्रमको सभापति राष्ट्रिय माध्यमिक, डहरवेरियाका विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्ष सुन्दर कुश्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता कठरिया , जोशीपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष लखन लाल चौधरी र शिक्षा शाखा प्रमुख संग्राम सिंह धामी लगायतका रहनु भएको थियो ।
यस्तै उदघाटन शत्रमा विभिन्न विद्यालयका शिक्षक, समाजसेवी, शिक्षा प्रेमी लगायतका व्यक्तिहरुको उपस्तिथी रहेका थियो । कार्यक्रमको संचालन शिक्षक बिक्रम चौधरी संचालन गर्नु भएको थियो । संस्कृति पुस्तान्तरण कार्यक्रममा विषयगत विज्ञहरु मार्फत योजना तयारी गरि लागु गरिने बताइएको छ ।उक्त योजना निर्माणमा आर्थिक एवं सामाजिक विशेषज्ञ डा. राम बहादुर चौधरी, कार्यक्रममा रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यपक गज बहादुर बम,गज बहादुर बम,अमर नाथ झा लगायतका विज्ञहरुले योजना निर्माण कार्यमा सहजिकरण गरि राख्नु भएको छ ।
कञ्चनपुरमा बसको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु भएपछि चक्काजाम